कांग्रेस नर्सरीमा महाधिवेशनको महाभारत - Ratopati
काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी विद्यार्थी भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को विधानमा ‘प्रत्येक दुई वर्षमा महाधिवेशन गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने’ उल्लेख छ । विधानलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म नेविसंघमा तीनपटक नेतृत्व फेरिने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हो । तर, फुटेको कांग्रेस २०६४ मा एक भएदेखि अहिलेसम्म एकपटक पनि नेविसंघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।
किन भएन महाधिवेशन ?
फुटेको कांग्रेस एक हुँदा गरिएको भागबन्डामा नेविसंघको नेतृत्व तत्कालीन संस्थापन पक्षको भागमा परेको थियो । भागबन्डाअनुरूप संस्थापन पक्षको नेविसंघ अध्यक्ष रहेका प्रदीप पौडेल अध्यक्ष बने भने शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको भ्रातृसंस्था नेविसंघ अध्यक्ष कल्याण गुरुङ सहअध्यक्ष बने । दुवै समितिमा रहेकालाई सदस्य बनाई २०६७ भित्र महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेड माउपार्टीले दियो । पार्टीको म्यान्डेडअनुरूप पौडेलले महाधिवेशन गर्न हरप्रयास गरे । मातहतनिकायका अधिवेशन गरे ।
तर, पार्टी नेतृत्व केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार दुई समितिलाई मिलाएर बनाएकाले ठूलो भएकाले महाधिवेशन गर्न सम्भवना नभएको भन्दै पौडेललाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइयो । दबाब थेग्न नसकी उनले ०६७ चैत १९ गते पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि करिब आठ महिना नेविसंघ नेतृत्वविहीन रह्यो । ०६८ माघ २१ मा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चुनेर कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी दिएर रञ्जित कर्णको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए ।
आयोजक समितिमा क–कसलाई राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि करिब चार महिना समितिले पूर्णता पाउन सकेन । दुई पक्षको भाग मिलाउँदा पौडेल नेतृत्वको एक सय ६ सदस्यीय समितिलाई ठूलो भयो महाधिवेशन गर्न सक्दैन भनेको पार्टी केन्द्रले एक सय २१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनायो । तैपनि कर्णले महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकबाट कार्यतालिकासहित महाधिवेशनको मिति तोके र प्रक्रिया सुरु गरे । सुरु गरेको प्रक्रिया पार्टीले पटक–पटक रोक्यो । पार्टीले नेविसंघ महाधिवेशनको मिति तोक्यो । फेरि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्यो ।
०७२ जेठ अन्तिम साता तोकिएको महाधिवेशनमा त कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशनस्थल काठमाडौँ आएपछि अघिल्लो दिन स्थगित गर्यो । यसले कांग्रेसको नर्सरीलाई बाँझो राख्ने काम गरेको छ । अध्यक्ष कर्ण भन्छन्, ‘मैले त दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न महाधिवेशन गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको थिएँ । महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशनस्थल आइपुगेपछि पार्टीले रोकिदियो के गर्ने ?’ नेविसंघले अन्तिमपटक महाधिवेशन गर्ने भन्दा ६५ जिल्लाको अधिवेशन गरेको थियो । जब कि अहिलेसम्म नेविसंघको महाधिवेशन हुँदा त्योभन्दा बढी जिल्लाको अधिवेशन भएको रेकर्ड छैन ।
खासमा १२औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका सुशील कोइरालाले महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले आफ्नो भजन गाउने हो कि होइन भन्नेमा दोधारे भएर महाधिवेशन गर्न नसकेका हुन् । उनका मान्छेले चुनाव नजित्ने जितेकाले उनको भजन नगाउने भएकाले महाधिवेशन गर्न नदिइएको हो ।
महाधिवेशन कहिले ?
१३औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएपछि बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले महाधिवेशन हुन बाँकी रहेका सबै भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैअनुरूप नेविसंघको महाधिवेशन गर्न कोअर्डिनेसनको जिम्मेवारी सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतलाई दिएका छन् ।
डा. महतले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गर्न आयोजक समिति अध्यक्ष कर्णलाई बोलाएर निर्देशन दिएको बताइन्छ । आयोजक समितिको बैठक अध्यक्ष कर्णले २५ जेठमा बोलाएका छन् । बैठकको एजेन्डा महाधिवेशन असार मसान्तभित्र गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउने रहेको छ । योपटक सभापति देउवाको नै प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेकाले महाधिवेशन हुनेमा नेताहरू आशावादी छन् । ‘अब महाधिवेशन हुने र निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने लगभग पक्कापक्कीजस्तै रहेको नेविसंघ पूर्वउपाध्यक्ष नयनसिंह महरले बताए ।
नेतृत्वका दाबेदार को–को ?
लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन नसकेकाले नेविसंघको नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षा राख्ने धेरै छन् । फुटेको पार्टी एक भएपछि एकपटक पनि महाधिवेशन नभएकाले दुई प्यानलबीच निर्वाचन हुने पक्का नै छ, त्यसमा पनि उपगुटले प्यानल बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।
संस्थापनबाट पनि नेविसंघको नेतृत्वमा पुग्न दाबी गर्ने सूची लामै छ । तर, सभापति देउवाले नेविसंघ हेर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेका डा. महतले नेविसंघ संस्थापन पक्षमा रहेका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरी दुईजनाको नाम सटलिस्टिङ गरेको स्रोतले बतायो । सटलिस्टिङमा नैनसिंह महर र जितजंग बस्नेत परेको स्रोतले बतायो । दुईमध्ये पनि लामो समयसम्म नेविसंघमा काम गरेका र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आफ्नो पक्षका कार्यकर्ता मात्रै नभई अर्काको पक्षका पनि तान्न सक्ने भएकाले महरलाई नै अध्यक्षको टिकट दिनुपर्ने तर्क राख्नेको मत धेरै रहेको स्रोतले बतायो । बस्नेतको भ्यालीभित्र राम्रै प्रभाव रहे पनि बाहिर नरहेको भन्दै नेताहरूले अन्य कुनै स्थानमा ‘एडजस्ट’ गर्नेगरी मनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । बस्नेतलाई सभापति देउवापत्नी आरजुले बोकेकी छन् भने महरलाई संस्थापनको पक्षमा रहेका पूर्वअध्यक्षहरूले बोकेका छन्, त्यसैले नैनसिंहको सम्भावना प्रवल रहेको स्रोत बताउँछ ।
पौडेल पक्षमा दाबेदार
अहिलेको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग पार्टी सभापतिमा हारेको रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहले नेविसंघको महाधिवेशनमा उम्मेदवार कसलाई बनाउने र कसरी जिताउने भन्ने रणनीति बनाउने जिम्मेवारी अनौपचारिक रूपमा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईको नेतृत्वमा पाँचजनालाई दिएको छ । ती पाँचजना सबै नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नै छन् ।
अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी पाएकामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, महेन्द्र शर्मा र केशव सिंह छन् । सिंहले आफूहरूलाई अनौपचारिक रूपमा नेविसंघ हेर्ने जिम्मेवारी दिएको स्वीकारे । स्रोतका अनुसार समूहले अध्यक्षमा दाबेदार रहेकाको पाँचजनाको सूची बनाएको छ । मनोजमणि आचार्य, दीपक भट्टराई, नीलकण्ठ रिजाल, क्षितिज भण्डारी र कुन्दन काफ्ले दाबेदार रहेको निष्कर्ष समूहको रहेको छ । तीमध्ये समूहले दुईजनाको सटलिस्टिङ गरेको बताइन्छ । सटलिस्टिङमा परेकामा दीपक भट्टराई र मनोजमणि आचार्य छन् ।
दुईजनाको नाममध्ये समूहमा रहेका संयोजक भट्टराई, गुरुङ, सिंह र शर्मा दीपकको पक्षमा र घिमिरे आचार्यको पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा शीर्षतहमा छलफल गर्न बाँकी रहेको समूहका एक सदस्यले जनाए । पौडेल समूहभित्र पनि नेविसंघमा पहिला दुई गुट थियो ।
दुई गुटमध्ये एक गुटको नेतृत्व गरेका विश्वप्रकाश शर्माले गुट परिवर्तन गरेको तथा त्यो ससूहका गगन थापा र प्रदीप पौडेल ‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ को अवस्थामा छन् भने गोविन्द भट्टराईले नेतृत्व गरेको टिम सबै पौडेल समूहमै छ । अहिलेका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक कर्ण पनि भट्टराई टिमकै हुन् । त्यसैले भट्टराई समूहकालाई नै अध्यक्षको टिकट दिने सम्भावना प्रबल छ । दीपक भट्टराई र आचार्य विश्वप्रकाशका मान्छे हुन् ।